Dowladda Jabuuti oo 1 Milyen oo Dollar ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay musiibadii Soobe | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Jabuuti oo 1 Milyen oo Dollar ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay...
Dowladda Jabuuti oo 1 Milyen oo Dollar ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay musiibadii Soobe
Deeqdani lacageed oo dowladda Jabuuti ay ugu talagashey in lagu gar gaaro dadkii ku waxyeeloobay mashaqadii 14kii October ka dhacday Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu wareejiyay Guddiga Qaran ee gurmadka,taasi oo cadadeedu dhan 1 Milyen oo Dollar.
Waxaa goob joog ka ahaa wareejinta deeqdaasi lacageed Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre,waxaana Danjiraha Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo lacagtaasi ku wareejiyay guddiga gurmadka Qaran uu sheegay in ay tahay lacag ay iska soo uruuriyeen shacabka reer Jabuuti oo ka dambqaday walaalohoodi dhibaataysan.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan uu ku hadlay magaca guddiga ayaa sheegay in ay guddoomeen deeqdaasi lacageed islamarkaana lagu taakulayn doono dadkii musiibadaasi saameysay kana mahadceliyay.
Dowladda Jabuuti ayaa kamid ah dowladihii ugu horeyeey oo gar gaar isugu jira dawooyin iyo dhaqaatiir gurmad ahba u soo direy Soomaaliya maalimo kadib markii uu dhacay qarixii Soobe,kaasi oo ay ku dhinteen boqolaal qof kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
Previous articleMAALINTA CARRUURTA ADDUUNKA 2017 WAR SAXAAFADEED
Next articleDowladda Jabuuti oo 1 Milyen oo Dollar ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay musiibadii Soobe(Sawirro)